घर प्रवास कुवेतमा दुवै मृगौलाले काम नगरेपछि एक म्याग्देली अलपत्र
२४ पुष २०७५, मंगलवार ०८:२८
कुवेतको ठाउँ आफन्त कोही छैंनन,दुबै मृगौंलाले काम गर्दैन, कम्पनीले पनि हेरेन अब कहाँ जाँ ?
कुवेतको ठाउँ आफन्त कोही छैंनन,दुबै मृगौंलाले काम गर्दैन,५ महिना देखी कम्पनीले तलब दिएन अब कहाँ जाँ ?म्याग्दी किदु बिनास खर्क वार्ड नं. ३ का ५२ बर्षिय छम बहादुर रन्तिजा बिगत २२ बर्ष देखी कुवेतमा कार्यरत रहदा-रहदैं अहिले दुबैं मृग्रौला काम नगरेर सिकिस्त बिरामी छन। उनी कार्यरत कम्पनीले ५ महिनाको तलब दिएको छैंन । उनको आगामी जनावरी १० तारिक फर्वानिया अस्पतालमा अप्रेसन हुँदैछ। मलाई कसले साथ सहयोग गर्ला ?? बाक़ी ऊनकै मुखबाट :-
Posted by कोसेलीन्यूज on Sunday, January 6, 2019